Roborock inodzoreredza iyo indasitiri kuCES 2022 | Gadget nhau
Miguel Hernandez | 10/01/2022 17:39 | Zviitiko, General
Roborock, iyo kambani inoshanda mukuvandudza uye kugadzira ese ari maviri marobhoti uye asina waya eimba vacuum cleaners, yakaratidzwa nhasi paConsumer Electronics Show 2022. (CES) mureza wayo mutsva, iyo Roborock S7 MaxV Ultra. Iine nyowani yakangwara yekuchaja dock, iyo S7 MaxV Ultra inofambiswa neRoborock yakanyanyisa matekinoroji kusvika parizvino yekuchenesa yepamusoro uye yakanyanya nyore.
Imwe yekuchaja doko inoita zvese: Kuenderana neiyo Roborock Empty itsva, Flush uye Zadza Base, inoderedza gadziriso yemanyorero yevashandisi. Iyo mop inokwesha otomatiki panguva uye mushure mekuchenesa zvikamu, kuve nechokwadi chekuti S7 MaxV Ultra yakagadzirira kumhanya kwako kunotevera. Iyo yekuchaja base inozvichenesa iwe paunenge uchigeza mop, ichichengeta chiteshi chiri mumamiriro akanaka. Pamusoro pezvo, iyo otomatiki yekuzadza tangi remvura inobvumira iyo S7 MaxV Ultra kutsvaira uye kukwesha kusvika 300m2, 50% kupfuura vakaitangira, nepo guruva bhegi rinobata tsvina kweanosvika mavhiki manomwe.
Nyowani ReactiveAI 2.0 chipingamupinyi chekudzivirira system: Yakashongedzerwa nemusanganiswa weRGB kamera, yakarongeka 3D mwenje, uye-nyowani-nyowani yekugadzirisa unit, iyo S7 MaxV Ultra inoona zvinhu zviri munzira yayo zvakanyanya uye nekukurumidza inogadzirisa kuchenesa zvakavakomberedza, zvisinei nemamiriro ekuvhenekesa. Uyezve, inoziva uye inowana fenicha muapp, ichikubvumidza kuti utange kuchenesa nekukurumidza kutenderedza matafura ekudyira kana masofa nekungobaya chiratidzo muapp. Inotozivisa makamuri uye zvinhu zvepasi, uye inokurudzira akakodzera ekuchenesa mapatani senge kutevedzana, kukweva simba, uye kukwesha kusimba. Iyo S7 MaxV Ultra inosimbiswa neTUV Rheinland kune yayo cybersecurity zviyero.
Iine inozivikanwa VibraRise tekinoroji: Yakagadzirirwa kusamira-mira kuchenesa masesheni, iyo S7 MaxV Ultra inoratidzira Roborock's inodaidzwa VibraRise® tekinoroji - musanganiswa wekukwesha sonic uye kuzvisimudza mop. Sonic yekuchenesa inokwesha pasi nehupamhi hwepamusoro kubvisa tsvina; nepo mop inokwanisa kuita shanduko yakatsetseka pane zvakasiyana, semuenzaniso, inosimudza otomatiki pamberi pemakapeti.
Yakasanganiswa neakanyanya kuyamwa simba re5100pa, iyo S7 MaxV Ultra inopa yakanyanya kucheneswa. Iyo S7 MaxV Ultra (S7 MaxV robot vacuum cleaner pack uye Emptying, Washing and Filling Base), ichawanikwa muSpain nemutengo we1399 euros, muchikamu chechipiri che2022. S7 MaxV robhoti yekutsvaira inogona kutengwa zvakasiyana. nemutengo we € 799.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Gadget nhau » General » Roborock inodzoreredza iyo indasitiri kuCES 2022